Natiijadii Imtixaanada Dowlada ee Dugsiyada Sare oo la shaaciyay [ Akhriso 10-ka Arday ee ugu horeeya] - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Natiijadii Imtixaanada Dowlada ee Dugsiyada Sare oo la shaaciyay [ Akhriso 10-ka Arday ee ugu horeeya] - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Natiijadii Imtixaanada Dowlada ee Dugsiyada Sare oo la shaaciyay [ Akhriso 10-ka Arday ee ugu horeeya]
Wasaaradda Waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay Natiijadii la wada sugayay ee Imtixaankala qaaday sanad dugsiyeedka 2015-2016.
NATIIJADA IMTIXAANKA KA AKHRISO HALKAN
Sida uu sheegay Wasiirka W/Waxbarashada C/qaadir Cabdi Xaashi immtixaanka oo la qaaday Bishii May 2016, waxaana u fariisatay arday ka badan ardaydii ka qaybgashay sanadkii hore.
Guud ahaan waxaa imtixaanka waxaa galay 11,574 arday, waxaana gudbay 10104, iyadoo ay dhaceen arday dhan 1470.
Tobanka arday ee kaalimaha ugu horeeya galay waxay noqdeen kuwa magacyadooda hoos ku qoran yihiin:
Previous articleXasan Sheekh oo xaal marin & raaligelin siiyay Nabadoon caana oo ka horjeestay in dib loo doorto
Next articleAKHRISO: Natiijada Imtixaanka Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya 2015-2016